Ihe na-akpata mmetụta griin haus: nsogbu na ngwọta | Green Renewables
Portillo nke German | 05/05/2022 12:00 | Gburugburu
Mmetụta griin haus bụ ihe okike nke ikuku mbara ala anyị na ya mere akụkụ nke ọrụ okike nke ịdị adị ndụ. Agbanyeghị, mgbe mmetụta a na-abawanye ma na-abawanye karịa mmetụta eke, mmetụta griin haus eke na-akwụsị ịdị adị wee bụrụ nke na-adịghị mma, ọkachasị n'ihi mmụba nke ọrụ mmadụ. N'etiti akpata mmetụta griin haus adịghị mma, nke kachasị pụta ìhè bụ mmụba nke ikuku griin haus sitere na usoro ume anyị. N'ụzọ bụ isi, mmụba nke mmanụ ọkụ na ihe ndị sitere na ya, gas na coal na-eme ka ikuku ndị a pụta, nke na-agbakwụnye na nsogbu ahụ. N'ime nsonaazụ nke ihe a, anyị na-ahụ mmụba nke okpomọkụ na mbelata nke ụdị. Ọ dabara nke ọma, enwere ihe ole na ole anyị nwere ike ime iji dozie nsogbu a.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere ihe na-akpata nke griin haus mmetụta na ya pụta.
1 Gịnị bụ griin haus mmetụta
2 Ihe na-akpata mmetụta griin haus
3 Kedu ihe bụ GHG
4 mmetụta na nsonaazụ
5 Ihe ngwọta nwere ike ime
Gịnị bụ griin haus mmetụta
Nke griin haus utịp Ọ bụ usoro okike nke na-eme na ikuku ụwa.. Usoro na-amalite mgbe ike anyanwụ rutere n'elu ụwa, na-agafe na mbara igwe, na-ekpo ọkụ n'ala ma ọ bụ geosphere, yana mmiri elu ma ọ bụ hydrosphere. Okpomọkụ nke na-esi n'elu mbara ala na-ebili mgbe ahụ, gas nke ikuku na-ahụ maka ijide akụkụ nke ike n'ụdị okpomọkụ, na ndị ọzọ na-alaghachi na mbara igwe site na ikuku. N'ụzọ dị otú a, ndụ nwere ike ịdị n'ụwa dị ka anyị si mara ya n'ihi na a na-edobe okpomọkụ kacha mma n'okpuru ọnọdụ ndị ọzọ.
Otú ọ dị, n'ime ọtụtụ afọ, mmetụta nke ọrụ mmadụ na mbara ala emetụtawo usoro a, na-eme ka ọ ghọọ ihe na-adịghị mma. Nke a eke usoro ọ na-emerụ ụwa na ya mere ndụ niile dị na ya, n'ihi na mmetọ sitere na ọrụ mmadụ amụbawo nke ukwuu na narị afọ ndị na-adịbeghị anya, karịsịa n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, o meela nke ukwuu nke na n'oge a, a na-emepụta mmetụta na-adịghị mma nke griin haus.
Ya mere, anyị bụ ụmụ mmadụ na-emetọ gburugburu ebe obibi site n'imeju ya na ikuku ikuku na ihe omume anyị kwa ụbọchị, dị ka imepụta, ịnya ụgbọ ala, iji ikuku ikuku ma ọ bụ ọrụ ugbo siri ike na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha na-arịgo n'ime ikuku ma na-edobe ha, na-egbochi okpomọkụ nke na-esi n'elu elu ka a chụpụ ya nke ọma ma na-ejide ya site na ikuku, nke bụ kpọmkwem ihe na-eme na greenhouses nke osisi, na-eme ka mmụba nke okpomọkụ nke ụwa dịkwuo elu.
Dị ka anyị kwuru, ihe na-akpata mmetụta griin haus na-adịghị mma bụ mmụba nke ọrụ mmadụ nke sitere na mmetọ, nke na-emepụta gas na-anọgide na ikuku ma na-enyere aka ibuli okpomọkụ. N'ozuzu, isi ihe kpatara nsogbu oyi akwa ozone bụ ihe ndị a:
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọrụ ugbo siri ike.
Jiri ihe na-efesa.
Ngwọta na-adịghị mma na iji ihe eme ihe.
Ọ na-eji mmanụ ọkụ na-emepụta ihe ma ọ naghị eji ike emeghari ohuru.
Oke ọkụ eletrik nke na-esighi na isi mmalite emeghari.
Iji ụgbọ ala emetọ eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi dịka ụgbọ ala, bọs, ọgba tum tum na ụgbọ elu na-eji ihe ndị sitere na mmanụ ọkụ.
Omume mmadụ ndị a niile na-eduga n'ịba ụba nke gas na-emerụ ahụ nke na-enye aka na mmetụta griin haus.
Kedu ihe bụ GHG
Isi ikuku griin haus nwere ihe mkpuchi thermal bụ ihe ndị a:
mmetụta na nsonaazụ
Mmetụta nke nsogbu ahụ na oyi akwa ozone mechara mee ka amata nke ọma n'ofe ụwa. Ọ dị mkpa ịghọta ma mee ka ndị ọzọ mara, karịsịa site na nkuzi nke ụmụaka, gbasara mmetụta na mmata nke mmetụta griin haus, na mkpa ya na ndụ mmadụ na ụdị osisi na anụmanụ ndị ọzọ. Ndị a bụ nsonaazụ nke nsogbu ikuku a:
Okpomọkụ nke mbara ala abawanyela nke ukwuu.
Mmetụta nke radieshon anyanwụ na-abawanye.
Mgbanwe ihu igwe.
Mmetụta ihu igwe na mgbanwe gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi.
Oké ọkọchị na-akawanye njọ n'ebe mmiri na-ezokarị.
A ga-enwekwu mmiri ozuzo na oké ifufe n'ebe ndị na-adịghị mmiri mmiri na mmiri ozuzo.
Mbibi ala, enweghị ọmụmụ maka ọrụ ugbo.
Agbaze nke okpu ice na glaciers, dị ka Galenland a ma ama na-agbaze.
Oke mmiri na-ebili na oke osimiri, oke osimiri, osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, wdg.
Iju mmiri na-eme na mpaghara ndị dị n'akụkụ mmiri n'ihi mmụba mmiri.
Ihe ngwọta nwere ike ime
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu banyere ihe ngwọta dị megide mmetụta griin haus, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa ime ihe niile kwere omume iji kwụsị mmụba ya ma belata ọkwa nke gas na-emerụ ahụ. Ya mere, dị ka ihe iji belata mmetụta griin haus ma gbochie mmụba ya na ịdị njọ ya, anyị nwere ike ịgbaso ndụmọdụ ndị a:
Belata ikuku ikuku griin ha dị ka CO2 na CH4.
Jiri isi mmalite ume ọhụrụ dochie mmanụ ọkụ, ihe ndị ha na-emepụta, gas sitere n'okike na kol.
Jiri ụgbọ njem ọha na ụzọ ụgbọ njem ndị ọzọ na-adịghị emetọ ihe, dị ka igwe igwe ma ọ bụ ụzọ ụgbọ njem ndị ọzọ gbasara gburugburu ebe obibi.
Welite mmata gburugburu ebe obibi n'etiti ụmụ amaala na, nke kachasị mkpa, ịkụnye ihe ọmụma a n'ime ụmụaka ma kuziere ha ihe ha nwere ike ime iji meziwanye nsogbu ahụ.
Belata oriri anụ, ya mere belata iji anụ ụlọ na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ahọrọ anụ ụlọ ndị gbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa na anụ ụlọ ndị ọzọ na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi.
Ndị gọọmentị na-etinye aka na-eme ihe iji belata nsogbu a ma gbochie mmụba nke mmetụta griin haus na mgbanwe ihu igwe. Ihe atụ nke usoro ndị a bụ Protocol Kyoto.
Gaa n'ihu na-enyocha mmelite enwere ike metụtara nsogbu gburugburu ebe obibi.
Megharịa ma rụọ ọrụ nke ọma. N'ime ntuziaka nrụgharị a, anyị na-akọwa otu esi emegharị ihe mkpofu n'ụlọ.
Akwụsịla ike, dị ka ọkụ eletrik n'ụlọ gị.
Rie ngwaahịa organic.
Nnukwu mmebi nke ihe ọkụkụ na anụmanụ n'ihi mgbanwe na ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke ụwa.
Mbugharị nke anụmanụ na ndị mmadụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe kpatara mmetụta griin ha na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ihe na-akpata mmetụta griin haus